Azịza ajụjụ | September 2019
Kedu ihe mmemme maka ilele foto na foto?
Ndewo Taa, iji lee foto na foto, ọ dịghị mkpa iji usoro mmemme ndị ọzọ (na Windows 7/8 OS ugbu a, Explorer adịghị njọ na ya). Ma obughi mgbe obula ma obugh ike ya nile. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa nke onyinyo ahụ na ya, ma ọ bụ lee ihe niile oyiyi nke onyinyo ahụ n'otu oge ahụ, belata n'ọnụ ya, gbanwee ndọtị ahụ?
Igodo na-ekpo ọkụ na Photoshop: njikọ na nzube
Mgbe mmadụ chere ngwa ngwa karịa kọmputa, ọ ga-adị mkpa iji zụọ mkpịsị aka na ebe nchekwa. Mụta na iburu hotkeys Photoshop n'isi ka foto dijitalụ na-apụta n'ìhè n'ìhè ọkụ. Ihe ndị dị na ya Photoshop Photo Boards Editor Buttons Table: Ijikọta Mmekọrịta Ịmepụta Gburugburu Gburugburu na Photoshop Atụmatụ Photoshop Photo Editor Dị iche iche na-ejikọ otu igodo - Ctrl.
Esi emeghe fb2? Esi gụọ akwụkwọ e-ede na komputa?
Ebu! Ikekwe, maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụghị ihe nzuzo na e nwere ọtụtụ narị puku e-akwụkwọ na netwọk. A na-ekesa ụfọdụ n'ime ha na usoro txt (ederede ederede dị iche iche iji mepee ha), ụfọdụ n'ime pdf (otu n'ime usoro akwụkwọ kachasị ewu ewu; ị nwere ike mepee pdf). Enwere e-akwụkwọ na-ekesa na usoro na-ewu ewu - fb2.
Onye na-agụ kaadị nchekwa-LA-3HD53 kwụsịrị igosipụta draịvụl na kọmputa
Ndewo Enwere m kọmputa desktọọpụ na Windows 7 (agbatị n'ụlọ). Onye na-agụ kaadị a nwere oghere ise maka draịva flash dị iche iche. Ọ malitere na eziokwu ahụ bụ na otu n'ime map abụọ ahụ e depụtara adịghịzi egosipụta, ọ bụ ezie na mbụ, enweghi nsogbu na nke a. Ugbu a ọ ga-ekwe omume rụọ ọrụ naanị otu kaadị. Ruo oge ụfọdụ, ejiri m nhọrọ a, ma otu n'ime map ahụ kwụsịrị ịpụta ma ọlị.
Kedu esi emepụta gif animation? Mmemme maka mmepụta gif
Na-ekele ndị ọbịa niile! Ikekwe ndị ọrụ ọ bụla na Intaneti bịara na foto ndị na-agbanwe (ma ọ bụ, ka mma, na-akpọ dịka faịlụ vidio). A na-akpọ foto ndị a dị ka ntụrụndụ. Ha bụ faịlụ gif, nke a na-ejikọta okpokolo agba nke foto a na-ejikọta (na oge ụfọdụ).
Kedu esi hụ faịlụ na nchekwa? ACDSee, Ọchịchị Kasịnụ, Explorer.
Ezi ụbọchị. Na diski, na mgbakwunye na faịlụ "nkịtị", e nwekwara faịlụ zoro ezo na usoro usoro, nke (dị ka ndị mmepe Windows) ga - ahụghị ndị ọrụ novice. Mana mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa iji dozie usoro dị n'etiti faịlụ dị otú a, ma iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ hụ ha. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịmebe folda na faịlụ ọ bụla site na ịtọlite ​​àgwà kwesịrị ekwesị na Njirimara.
Otu esi mechie usoro ihe omume ma ọ bụrụ na oyi na-acha ya ma ọ dịghị emechi
Ezi ụbọchị niile. Ị na-arụ ọrụ dị ka nke a, ị na-arụ ọrụ na mmemme, mgbe ahụ, ọ na-akwụsị ịzaghachi bọtịnụ bọtịnụ ma hapụzie ya (ọzọ, ọ na-egbochi gị ọbụna ịchekwa ọrụ nke ọrụ gị na ya). Ọzọkwa, mgbe ọ na-agbalị imechi usoro ihe omume dị otú a, mgbe ọ bụla ọ dịghị ihe mere, ya bụ, ọ naghị emeghachi omume na iwu (mgbe mgbe n'oge a, onye ọbụla na-abata na hourglass video) ... N'isiokwu a, m ga-atụle ọtụtụ nhọrọ maka ihe a ga-eme iji mechie usoro a kpara.
Otu esi ehichapụ ihe nyocha ahụ site n'ájá na stains
Ezi ụbọchị. N'agbanyeghị otú ị dị ọcha na ụlọ (ụlọ) ebe kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ dị, ka oge na-aga, ihuenyo ga-ejupụta n'ájá ma gbaa alụkwaghịm (dịka ọmụmaatụ, ntụgharị aka mkpịsị aka). "Dirt" dị otú ahụ ọ bụghị nanị na ọ na-emebi ọdịdị nke nyocha (karịsịa mgbe ọ gbanyụrụ), ma na-etinyekwa aka na ilele foto dị na ya mgbe a gbanyere ya.
Otu esi mepee Editor Windows
Ezi ụbọchị. Ihe ndekọ usoro - ọ bụ n'ime ya na Windows na-echekwa data niile banyere ntọala na sistemụ nke usoro ahụ n'ozuzu ya, na nke mmemme ọ bụla. Na, ọtụtụ mgbe, na njehie, mkpọka, ọgụ mgbochi, ntanetị mma ma na-achọpụta Windows, ị ga-abanye ndekọ ndekọ usoro ihe a. N'okwu m, mụ onwe m na-edegharị ugboro ugboro banyere ịgbanwe agbanwe ọ bụla dị na ndekọ ahụ, ihichapụ alaka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ (ugbu a, i nwere ike ịkọwa ya n'isiokwu a :)) ... N'enyemaka isiokwu a, Achọrọ m inye ụfọdụ ụzọ dị mfe Esi emeghe nchịkọta akụkọ na usoro Windows operating system: 7, 8, 10.
Otu esi jikọọ ochie console na nyocha ọhụrụ (dịka ọmụmaatụ, Dendy, Sega, Sony PS)
Ndewo Nchọgharị nke oge ochie - mmetụta siri ike ma na-emetụ n'ahụ. Echere m na ndị na-egwuri egwu Dendy, Sega, Sony PS 1 (na ihe ndị ọzọ) nwere ike ghara ịghọta m - ọtụtụ n'ime egwuregwu ndị ahụ aghọwo ndị nkịtị, ọtụtụ n'ime egwuregwu ndị ahụ bụ ezigbo ihe (nke ka na-achọ). Iji kpọọ egwuregwu ndị a taa, ịnwere ike ịwụnye mmemme pụrụ iche na kọmputa (emulators, m gwara ha ebe a: https: // pcpro100.
Gịnị mere kọmputa ji ekpo ọkụ?
Igbubiga onwe ya ókè na imechi onwe gị nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ bụ ihe a na-ahụkarị. Mgbe nsogbu dị otú ahụ bilitere n'oge okpomọkụ, ọ dị mfe ịkọwa ya site na nnukwu okpomọkụ dị n'ime ụlọ ahụ. Ma mgbe mgbe nsogbu ndị dị na thermoregulation anaghị adabere na oge ahụ, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ịchọpụta ihe kpatara kọmputa ji ewee ọkụ.
Etu esi kesaa Ịntanetị site na ekwentị gaa na kọmputa (site na USB cable)
Ezi ụbọchị! Echere m na ọ bụla onye ọ bụla chere ọnọdụ ndị dị otú ahụ ihu mgbe ọ dị mkpa ịkekọrịta Ịntanetị site na ekwentị na PC. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ, m na-eme nke a n'ihi na onye na-ahụ maka Ịntanetị nwere nkwarụ nkwurịta okwu ... Ọ na-emekwa na m weghachite Windows, ọ bụghịkwa ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị netwọk ka arụnyeghị ya.
Kedu otu esi ekpebi afọ nke onye? Ọrụ ntanetị
Ndewo Ogologo oge gara aga, otu n'ime ezigbo ndị m maara site na foto ochie: ụfọdụ n'ime ha bịanyere aka na ha, ma ụfọdụ adịghị. Ya onwe ya, n'enweghị oge ọ bụla, jụrụ m: "ọ ga-ekwe omume ịmata afọ nke mmadụ na ya site na foto?". N'ụzọ ziri ezi, mụ onwe m enweghị mmasị na nke ahụ, ma ajụjụ ahụ yiri ka ọ na-adọrọ mmasị m, ekpebiri m ịchọta ntanetị maka ụfọdụ ọrụ n'ịntanetị ... achọtara m ya!
Nsogbu mgbe ejikọta ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa
Ezi ehihie, Andrew! Ejiri Windows 7, 64-bit, mbipute bụ isi (ikike). Ntuchi nke nje-emegide (WWW) 11.5. Intanet. Ọrụ m bụ ibudata ọtụtụ faịlụ dị iche iche na ekwentị dị iche iche. Ebe faịlụ ndị a dị, amaghị m kpọmkwem. Mgbe ejikọta na kọmpụta site na iji eriri, ozi na-egosi: "Ejighị ngwanrọ maka ngwaọrụ ahụ."
Ezi ụbọchị. Echere m na ọtụtụ ndị, mgbe ha na-arụ ọrụ na komputa ma ọ bụ laptọọpụ, ha nwere ajụjụ na-enweghị isi ma dị mfe: "otu esi achọpụta ụfọdụ njirimara nke kọmputa ...". M ga-agwakwa gị na ajụjụ a na-etolite ugboro ugboro, na-emekarị n'ọnọdụ ikpe ndị a: - mgbe ị na-achọ ma na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala (https: // pcpro100.
Kedu ụdị nke Windows ịhọrọ iji wụnye na kọmpụta / kọmputa
Ezi ehihie Ihe ole na ole n'ime isiokwu m bu ihe nkuzi nke Okwu na Excel, ma oge a ka m kpebiri ịga n'ụzọ ọzọ, ya bụ, ịkọ obere banyere nhọrọ Windows maka kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. Ọ na-apụta na otutu ndị ọrụ na-adịghị ọhụrụ (ma ọ bụghị naanị mmalite) na-efu n'ezie tupu ịhọrọ (Windows 7, 8, 8.
Otu esi eme ka RAM laptọọpụ
Ezi ụbọchị. Echere m na maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ gaghị abụ ihe nzuzo na arụmọrụ nke laptọọpụ dị nnọọ mkpa na RAM. Na ihe RAM - mma, n'ezie! Ma mgbe mkpebi nke ime ka echeta na ịzụta ya - ajuju nke ajụjụ niile na-ada ... N'isiokwu a, m chọrọ ịgwa gị banyere ụfọdụ nuances onye ọ bụla kpebiri ịgbasa RAM memory nke laptọọpụ.
Ihe kachasị mkpa: ihe niile dị na egwuregwu, ma otu ụbọchị ihe niile gbanwere, textures ghọrọ nkọ ma foto ahụ malitere ịkụ na ebe, ọ bụ ezie na m KWESỊRỊ niile agbanweghị ihe ọ bụla site na egwuregwu mbụ, ọ bụ site na ncha ka enwere nsogbu. Ugbua esizi na steam / ahihia / Windows / kpochara PC, gbanwere nvidia ntọala, ntọala (mmekorita vertic, triple buffering), weghaara osisi ọkụ na nvidia (echere na nsogbu ọhụrụ) gbanwere kaadị vidiyo, nyochaa.
Esi gbanwee ndọtị nke faịlụ ahụ na Windows 7, 8?
Ntinye nchịkọta bụ mkparịta ụka nke mkpụrụedemede 2-3 nke akwụkwọ ozi na nọmba agbakwunyere aha faịlụ ahụ. A na-eji ya eme ihe iji chọpụta faịlụ ahụ: ya mere os maara usoro nke mepee ụdị faịlụ a. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ụdị egwu egwu kachasị egwu bụ "mp3". Site na ndabara, Windows Media Player mepee faịlụ ndị dị na Windows.
Ndewo Ọtụtụ ndị ọrụ adabererịrị na otu n'ime kọmputa na-emechi windo usoro - ọnọdụ njikere (na-enye gị ohere ngwa ngwa gbanyụọ ma gbanye PC, na sekọnd abụọ). Ma, e nwere otu ọgba ọsọ: ụfọdụ adịghị amasị eziokwu ahụ na-egosi na a ga-akpọte laptọọpụ (dịka ọmụmaatụ) site na bọtịnụ ike, na òké ahụ adịghị ekwe ka nke a; Kama nke ahụ, a gwara ndị ọrụ ndị ọzọ ka ha gbanyụọ òké ahụ, ebe ọ bụ na pusi dị n'ime ụlọ na mgbe ọ na-emetụ ya na mberede, kọmputa ahụ na-eteta ma malite ịrụ ọrụ.